प्रधानमन्त्रीले नेपाली डाक्टरको इज्जत बढाइ दिनुभयो : डा. सुन्दरमणि दीक्षित – Khabarhouse
प्रधानमन्त्रीले नेपाली डाक्टरको इज्जत बढाइ दिनुभयो : डा. सुन्दरमणि दीक्षित
Khabar house | २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०७:५३ | Comments
काठमान्डौ : डा. सुन्दरमणि दीक्षित नेपालकै चर्चित वरिष्ठ फिजिसियन हुन् । सामान्य चिकित्सामा एमडी गरेका उनी विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक लगायत विषयवस्तुलाई नजिकबाट नियाल्दै त्यस माथि खरो टिप्पणी राख्छन्। त्यसो त उनले नागरिक समाजका आन्दोलनमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएपछि डा. दीक्षितले खुसी व्यक्त गर्दै यसले एकदमै सकारात्मक सन्देश दिए को विचार व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्लो समयमा सामान्य बिरामी हुँदा पनि विदेश गएर मुलुकको ढुकुटी रित्त्याउने नेताहरूको प्रवृत्ति जसरी इज्जत गुमेको थियो, त्यसलाई ओलीलाई फर्काइ दिएको उनको अनुभव छ । मुलुक भित्रै मिर्गौला प्र’त्यारोपण गराउने प्रधान मन्त्रीको निर्णयको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. दीक्षितले आफ्ना विचार यसरी राखे: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दोस्रोपटक सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ, यसले एकदमै राम्रो सन्देश गएको छ।
नेपाली डाक्टर एवं नर्सको टिमले जटिल शल्यक्रिया पश्चात् ओलीजीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको थियो, एक चिकित्सकको नाताले यो एकदमै गर्वको विषय हो मेरा लागि। यसले अन्य नेताहरूलाई पाठ सिकाएको छ । अब अन्य नेताहरूलाई पनि प्रश्न तेर्सिएको छ–प्रधानमन्त्रीले यत्रो ठूलो शल्यक्रिया त शिक्षण अस्पतालमै गराउनुभयो, अब हामी चाहिँ कुन नाकमुख देखाएर सानो–सानो उपचारका लागि पनि बाहिर जाने?
प्रधानमन्त्रीको नेपालभित्रै भएको शल्यक्रियालाई मैले तीन पक्षबाट हेरेको छु। पहिलो, शिक्षण अस्पतालमै ‘किड्नी’ प्रत्यारोपण गराएर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो ढुकुटी रित्याउनबाट रोक्न एउटा ठूलो काम गर्नुभयो । यदि विदेशमा यो प्रत्यारोपण गराएको भए मुलुकको ढुकु टीबाट धेरै पैसा खर्च हुन्थ्यो। यसले मुलुककै अस्पतालमा उपचार व्यवस्था हुँदाहुँदै विदेशी अस्पताल गएर ढुकुटी रित्याउनु हुँदैन भन्ने सन्देश अन्य नेतालाई पनि दिएको छ।
दोस्रो, ओलीजीले शिक्षण अस्पतालमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने निर्णय गरेर नेपालका चिकित्सकमाथि नेपालीको विश्वास जगाइदिनुभयो, कसैलाई यो केही होइन जस्तो लाग्नसक्छ, तर, यो धेरै ठूलो काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका डाक्टर माथि देशको भरोसा छ भन्ने विश्वास जगाइदिनुभयो उहाँले। अझै भनूँ, उहाँले त हाम्रा नेपाली डाक्टरको इज्जत नै बढाइ दिनुभयो।
तेस्रो, संसारमा अहिले हामी नेपाललाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा चिनाउन खोजिरहेका छौं,अहिले आएर कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्यसलाई ‘हावा’ खुवाइदियो, अर्थात् नेपालको पर्यटन क्षेत्र नमज्जाले प्रभावित भयो, यही वर्ष। अहिले ओलीजीको शल्यक्रिया पछि संसारभरिका सरकार प्रमुख तथा नेताहरूले बधाई दिएका छन्। योसँगै उनीहरूले के पनि थाहा पाए भने ओलीजीको यत्रो शल्यक्रिया नेपालमै भएको रहेछ।
यसबाट नेपाली डाक्टर पनि क्षमतावान रहेछन् है, नेपाल खाली गएगुज्रिएको मुलुक मात्र होइन रहेछ, खाली अविकसित मुलुक मात्र होइन रहेछ, नेपाललाई खाली हेप्नु मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएको छ। यसले गर्दा ओलीजीले यसपालि जे आँट, अठोट गरिदिनुभयो, हुनत उहाँले यो सबै बुझिकन गर्नुभएको थियो, त्यसैले पनि उहाँ साधुवादका पात्र हुनुहुन्छ।
ओलीजीले मुलुकभित्रै शल्यक्रिया गराउनु मेरा लागि गौरवको कुरा भएको छ, यो त नेपालीकै गौरवको कुरा हो, देशकै लागि गौरव हो। यो कार्यका लागि प्रधानमन्त्रीजीलाई म धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने शुभकामना छ मेरो।उहाँको किड्नीले धेरै वर्ष काम गरोस्, यही आशा गर्न सकिन्छ। यसमा म अलिकति केही प्रसंग जोड्न चाहन्छु- २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि विभिन्न दलका नेताहरू सुविधाभोगी हुँदैगए, सरकारी ढुकुटी रित्याउन पाइने भएपछि मुलुकभित्रै उपचार हुने रोगमा पनि बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सरकारी ढुकुटी रित्याउन खोज्ने प्रवृत्ति घटेको छैन।
बरु पञ्चायतकालमा राजा तथा राजपरिवारका सदस्यले मुलुक भित्रै उपचार गराउँथे । राजपरिवारका सदस्यले बरु मुलुभित्रै अपरेसन गराउँथे । वीरेन्द सरकारले ८–१० वर्षको उमेरमा दीपेन्द्रलाई ‘गलस्टोन’ हुँदाखेरि वीर अस्पतालमै अप’रेसन गराएको मलाई सम्झना छ। तपाईं भन्नुस् न, राजदरबारले बाहिर लैजान नसकेर दीपेन्द्रको अपरेसन यहीँ गरेको त थिएन नि?
वीरेन्द्रको ‘आन्टी’, त्रिभुवनको जेठी छोरी लगायत राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको उपचार वीर अस्पतालमै एको थियो। एकपटक बडा महारानी रत्नलाई गोली लागेछ, त्यत्रो गोली लाग्दा पनि राजा महेन्द्रले रत्नको काठमाडौंमै उपचार गराइबक्सिएको थियो । उप चारका लागि दिल्ली लैजान नसकिने भन्ने थिएन नि, त्यस्तो बेलामा। तर, हामीले त्यो बेला राजपरिवारले जनतालाई के सन्देश दिन चाहेको थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
त्यतिखेर राजपरिवारका सबै सदस्य मुलुककै सरकारी अस्पतालमा गएर उपचार गराउँथे। पछिल्लो समय विभिन्न दलका सबै नेताले मुलुक भर गएर महँगा अस्पतालमा उपचार गराउन थाले, यसबाट हाम्रो इज्जत नेताहरूकै कारण खत्तम भएको थियो। अहिले आएर ओलीजीले त्यो इज्जत फर्काइदिनुभयो, उहाँलाई धेरैधेरै धन्यवाद!